Famerenana amin'ny laoniny ny ala honko sy ny ahidrano | Reef Resilience
The zava-dehibe ny fandriana sy ala honko, ary ny fahatsapan'izy ireo ho an'ny fahasamihafana maro, dia midika fa matetika izy ireo no mifantoka amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny. Ny famerenana amin'ny laoniny ireo toeram-ponenana ireo dia matetika takiana amin'ny ampahany amin'ny tetik'asa fampandrosoana amoron-dranomasina, na toy ny tetikady fanarenana na amin'ny ampahan'ny drafitry ny fananganana. Maro amin'ireo fiheverana izay tokony ampiharina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara dia manan-danja ihany koa amin'ny gaza sy ny honko. Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ireo olana fototra sy ireo hevi-dehibe izay tena manan-danja tokoa amin'ny famerenana ny ala honko sy ny ahitra.
Mangiran-dratsy ny moron-dranomasina. Sary © Tim Calver
Na dia misy lanjany lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina amoron-tsiraka sy ny karazam-biby mifandraika amin'izany aza ny tontolo iainana ala honko dia potika amin'ny taha mampatahotra. Ireto fandrahonana manaraka ireto dia miteraka fatiantoka ala honko manerantany: fiompiana makamba, famokarana saribao sy fitrandrahana ala, fitrandrahana solika ary fitrandrahana, fizahan-tany, fivezivezena ary fanitarana ny tanàna, ary fampandrosoana ny seranan-tsambo sy ny arabe. Androany, latsaka ny antsasaky ny rakotra ala honko eto an-tany sisa tavela. Nahatratra 50% isanjaton'ny fahasimban'ny ala honko tato anatin'ny taona vitsivitsy no vokatry ny fanapahana mazava ny fambolena makamba. ref
Ny famerenana amin'ny laoniny ny toeram-ponenana dia nekena ho fomba fitsaboana tsara indrindra mahomby sy mahomby indrindra. Misy karazany roa ny famerenana ny famerenana amin'ny laoniny: 1) mamerina manandratra hydrostezy amin'ny alàlan'ny fakana an-keriny na famerenana, sy ny 2) ny famerenana indray ny faritra voasakana mankany amin'ny fisaritahan'ny riaka. ref
Fitsipika fananganana mangatsiaka mahomby ref ampidino ireto manaraka ireto:
Eritrereto ny antony na antony mahatonga ny fahafatesana na ny fanjavonan'ny honko avy amin'ny faritra mahaliana. Raha mbola eo an-dalam-pandrosoana hatrany (ie, tondra-drano mandalo), dia mety hisakana ny famerenana amin'ny laoniny izany.
Ampiheno na esory ireo adin-tsaina maharitra eo amin'ny faritra. Ny ohatra iray dia ny fametrahana mpanangom-bazaha eny amin'ny lalana iray izay nanorenana ary manakana ny fantsom-panafody na ny filalaovana rano. Tena mahazatra ny mahita lalana toy izany amin'ny ala honko eo amin'ny sisiny mitoka-monina, ary ny ala honko ao amin'ny faritry ny rano. Ireo faritra misy ala honko koa dia matetika iharan'ny tondra-drano. Tena ilaina ny famerenana ny rano amin'ny alàlan'ny famerenana.
Raha toa ny fanesorana na famenoana fitaovana famerenana amin'ny tranokala famerenana, dia tena zava-dehibe ny famolavolana sy ny fanaraha-maso amim-pitandremana ny taranja farany (ie, ny haavon'ny tany raha oharina amin'ny daty nanoratana). Ny fahadisoana tokana mahazatra indrindra natao tamin'ny famerenana ny ala honko dia ny tsy fahombiazan'ny hamerenana indray ny fahasamihafana ara-pahasalamana marina. Tokony hahatakatra ny halavany sy ny faharetan'ny fandefasana tondra-drano ho an'ireo karazana honko. Jereo ny fiheverana maro izay ahafahana mitsangana mangatsiaka ara-pahasalamana eo amin'ny toerana iray faran'izay haingana amin'ny tranokalan'ny famerenana amin'ny laoniny, ary mieritreritra ny hametraka sehatra mitovy amin'ny tranokala famerenana amin'ny laoniny. Ireo andiam-pifaneraserana samihafa dia mitaky faritra maro samihafa.
Ny singa manan-danja amin'ny famerenana ny ala honko dia ny famolavolana sy ny fametrahana ny rihana sy ny lakandrano. Ny renirano tidal dia manome fahafahana hanatona trondro sy ala honko hafa, ary mamela ny fandotoana ny rano.
Ny filàna ny fanamboarana ala honko dia miovaova be avy amin'ny tranokala. Ny fanapahan-kevitr'izy ireo na hamboly na hampiasana karazam-borona toy ny Batis dia miankina amin'ny fahaiza-manaon'ny ekipa mpanamboatra sy ny fanamarihana avy amin'ny faritra mitovy amin'izany nandritra ny taona maro.
Mitombo ny fihenan-tany maneran-tany noho ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny antony hafa mampiavaka ny tontolo iainana. Ny faritra eny amoron-dranomasina amin'ny morontsiraka izay efa voakasik'ireo fihetsiketsehana ataon'ny olombelona (miteraka sedimentation, fampandrosoana amin'ny fiterahana, eutrophication ary fiantraikany hafa amin'ny tontolo iainana) dia tena mora marefo ny fiovan'ny toetrandro. Ny famerenana amin'ny laoniny dia mety hampiditra ny fanatsarana ny toe-piainana ara-tontolo iainana (ohatra ny kalitaon'ny rano) mba hamporisihana ny fanavaozana voajanahary na mety hampiditra seedling na famindrana ny zana-ketsa na ny zavamaniry matotra avy amin'ny fandriam-bahiny. Azo afindra ny fandrianan'ny lakandrano amin'ny famporisihana ny fananganana voajanahary voajanahary amin'ny faritra izay nahitana fanatsarana ny kalitaon'ny rano. Ny fomba fiasa miverimberina amin'ny famerenana ny zana-trondro dia ny famindrana ny olona nalaina avy amin'ny fandriam-pahasoavana ara-pahasalamana na zana-ketsa natsangana teo ambany fitahirizana laboratoara. Amin'ny toe-javatra sasany dia azo ambolena na am-pitaovana ny voa. Ny famafazana dia azo ampiasaina irery na miara-miasa amin'ny teknolojian'ny fanetsana.
Ny famerenana ny fitsangatsanganana sy ny ala honko (ambony) dia mety ho tetik'ady azo itokisana hanampiana ny fanarenana manaraka ny fanelingelenana. Sary © Tim Calver
Maromaro ny antontan-taratasy fitarihana teknika (jereo ny fizarana loharano eto ambany) no navoaka mba hanampiana ireo mpanao famerenana amin'ny laoniny amin'ny fisafidianana ireo tranokala famindrana ary amin'ny fisafidianana fomba fanarenana mety. Tanjona amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny fepetra eo an-toerana, karazan-dranomasina, ny teti-bolan'ny tetikasa no hamaritra hoe inona ny fomba fambolena mety mifanentana amin'ny toerana iray. Vantany vao nitranga ny famindrana dia tokony ho arahi-maso ireo tranokala hamaritana ny tahan'ny fivelomana, ny habetsaky ny fitifirana ary ny fitaterana ny vatan'ny fifindrana. Ny torolàlana momba ny famerenana amin'ny laoniny lehibe dia misy:
Fantaro ireo tanjona tetikasa momba ny fandrakofan'ny gaza, ny akora noforonina ary ny fiasa ara-tontolo iainana amin'ny fandriam-bozaka natsangana
Koordinate izay manome alàlana ny hampihenana ny faharetan'ny fanavaozana sy ny fankatoavana
Mitahiry ny fahasamihafana ara-pananahana (mifidy tahiry entin-tanana avy amin'ny farafara maromaro)
Fanadihadiana sy voka-pikarohan'ny tranokalam-pitantanana mba hiantohana fa ny fe-potoana fanarenana ny tontolo iainana dia manohana ny famerenana amin'ny laoniny ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanimban'ny rivo-doza ny ala honko sy ny teknika sy ny fandaniana amin'ny famerenana amin'ny laoniny taorian'ny tafio-drivotramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy famerenana ny ala honko ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoao anatin'izany ny taratasy lehibe sy ny torolàlana momba ny famerenana amin'ny laoniny ny honko)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMangrove.org